မိုးနတ်မင်းကြီးရဲ့ သမီးလေး ပညာထူးချွန်မှုကြောင့် အမေရိကန်တက္ကသိုလ် ဆက်တက်ခွင့်ရပြီ – Zartiman
ဟုတ်ပါတယ်ရှင်… အန်ကယ်ဦးထွန်းလွင်ရဲ့ သမီး “စွမ်းရည်ထွန်းလွင်” ပါတဲ့….ဟယ်… မကြီးကြူရယ်….သမီးက ဒီလောက်တော်တာ… အန်ကယ်ဦးထွန်းလွင်ကြီးက မကြားဘူးလားဟယ်…. အန်ကယ်ရေ… အန်ကယ့်သမီး “စွမ်း” ဘယ်လောက် “စွမ်းရည်” ရှိကြောင်း တ လောကလုံးကို ကြွားလိုက်စမ်းပါ..အန်ကယ်ရာ….“စွမ်း” တိုင်းပြည်အကျိုးပြု ရည်ရွယ်ချက်တွေ အောင်မြင်ပါစေ….. “စွမ်း”လို “စွမ်း ရည်”ရှိတဲ့ လူငယ်များစွာပေါ်ပေါက်ပါစေ….အနာဂတ်မှာ “စွမ်းရည်”ရှိတဲ့ နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်ပါစေ….။
ဒီလောက်စွမ်းရည်ရှိတဲ့ မြန်မာသမီးငယ်လေး တစ်ယောက်ကိုတွေ့ရ သိရတာ နိုင်ငံအတွက် အားရှိလိုက်တာ။ဒီလိုစွမ်းရည်ရှိတဲ့ သားငယ် သမီးငယ်တွေ အများကြီးပေါ်ထွန်းပါစေ…အဲဒီစွမ်းရည်ရှိတဲ့ သမီးငယ်လေးနံမည်က “စွမ်းရည်“တဲ့ မြန်မာပြည်က ၄ တန်းကျောင်းသူ “စွမ်း ”…. စင်္ကာပူကို မိခင်နဲ့အတူ လာလည်ရင်း …. ခဏတည်းတဲ့အိမ်က အိမ်ရှင်ကလေးလေးတွေနေတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက အစိုးရကျောင်းမှာ primary(4) ( Grade 4) အတွက် ဝင်ခွင့်စာမေးဝင်ဖြေကြည့်ရာ။
သူ့အဖြေတွေကို အဲဒီကျောင်းက သဘောကျပြီး တစ်တန်းကျော်ကာ primary (5) မှာ ဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် …စင်္ကာပူမှာ ကျောင်း နေဖြစ်သွားသတဲ့။သူများတိုင်းပြည်မှာ သမီးငယ်လေးကျောင်းတက်မှာမို့ မိခင်မှာ ကျန်တဲ့သားငယ်သမီးငယ် ခင်ပွန်းတို့ကိုထားခဲ့ပြီး သ မီးကို လိုက်စောင့်ရှောက်ရသတဲ့။ စွမ်း လေးက အားနာပြီး အမေ..ရန်ကုန် အဖေ့ဆီပြန်ပါ။သမီးကို အမေ့မိတ်ဆွေအိမ် တစ်အိမ်အိမ်မှာသာ ထားခဲ့။ သမီးနေတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးအတွက် သမီးဖြစ်အောင်နေမယ်လို့ အမေကိုပြတ်ပြတ်သားသားပြောသတဲ့။
တစ်ကယ်လည်း “စွမ်း”လေးဟာ လိမ္မာပြီးနေတတ်တော့ နေလေရာမှာ အဆင်ပြေသတဲ့။စွမ်း” လေးက သိပ်ဇွဲရှိပြီး လုပ်သင့်တာကိုသိ၊ သိ တဲ့အတိုင်းလည်းလုပ်နိုင်တဲ့ ကလေး။ “စွမ်း”ငယ်ငယ်က သိပ်“၀”တာ။ “၀”တာမှ ကစ်နေပြီး လက်ကောက်ဝတ်လေးတွေတောင် မမြင်ရ ဘူးတဲ့။ စင်္ကာပူကျောင်းတွေက obesity ပြဿနာကို အလေးထား ပညာပေး ပရိုဂရမ်တွေတစ်စိုက်မတ်မတ်လုပ်တာက တစ်ကြောင်း၊ ဆယ်ကျော်သက်နီးပါးသမီးငယ်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် peer pressure ကြောင့်တစ်ကြောင်း ဖြစ်မယ်ထင်တယ်….။
“စွမ်း” ဝိတ်လျှော့တော့တာဘဲ။ မစားသင့်တဲ့ အစာကို မစားသင့်တဲ့အချိန်မှာ မစားသင့်သလောက် မစားကိုမစားဘူး။ ခြောက်လွှာမှာရှိတဲ့ အိမ်ခန်းကိုပြန်ရင်လည်း လှေကားနဲ့ဘဲ တက်တယ်…ဆင်းတယ်။ တစ်နှစ်အတွင်း “စွမ်း”ပိန်သွားတာ…. အခုဆိုရင် ၂၀ ကျော်သက် “စွမ်း” က … အရမ်းလှ ။စွမ်း“ လိမ္မာကြောင်း၊ ဇွဲရှိကြောင်း၊ ဉာဏ်ရှိကြောင်းပြောပြတာပါ။ Physically အောင်မြင်တာတွင်မက… Academically လည်းအောင်မြင် လိုက်သမှ…..PSLE အောင်တော့… စလုံးတွေတောင် အိပ်မက်မက်ယူရတဲ့ ။
Raffle Girls’ School (RGS) ကို ဝင်ခွင့်ရသတဲ့။စင်္ကာပူမှာတောင် လူ့မလိုင်တွေမှ ဝင်နိုင်တဲ့ကျောင်း။ “စွမ်း” RGS ဝင်ခွင့်ရသွားတော့ စွမ်းနေခဲ့တဲ့ neighbourhood Primary School က ဂုဏ်ယူလို့မဆုံးဘူးတဲ့။RGS မှာ year (4) ပြီးတော့ စင်္ကာပူရဲ့ The most prestige Junior College ဖြစ်တဲ့ Raffles Institution မှာတက်နေရင်း… ရှေးရိုးဆန်နေတာလေးတွေ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ Singapore Education System က ရုန်းထွက်ချင်လာတယ်။အတန်းဖော် လူ့မလိုင်လေးတွေဟာ အမှတ်တွေကောင်းဖို့ အပြိုင်အဆိုင်ကြိုးစားကြရင်း။
University ကောင်းကောင်းတွေဝင်ဖို့သာ အာရုံစိုက်ကာ စာသင်ခန်းအပြင်ဘက်က လောကကြီးကိုမေ့နေကြတယ်၊ စာအုပ်ထဲက ပညာ တွေကို apply လုပ်ဖို့ သတိမရကြဘူး။“စွမ်း” ကတော့ out of the box ကို ကြည့်ချင် မြင်ချင် တွေးချင်တာ ကြောင့် prestige RI ကိုစွန့် လွှတ်ပြီး အမေရိကားက University တွေကို ဝင်ခွင့်လှမ်းလျှောက်တာ တက်ခွင့်ရသွားတယ်။ ဘယ် University လဲ သိလား………. “ University of California Berkeley”……. OMG!ဘယ် ဘာသာယူလဲ သိလား….. “Landscape Architecture”……. Interesting ! ။
စွမ်း” ကိုယ်တိုင်က artist လေ… ပန်းချီလည်းဆွဲတယ်။“UC Berkeley” က ဘွဲ့ ရပြီးတော့ ဘယ်လို ဘဝခရီးဆက်လဲ သိလား….. မြန်မာ ပြည်ပြန်လာတယ်။ ဘာလုပ်လဲသိလား….. “ဒို့အိမ်” Project လုပ်နေတယ်။နယ်သာလင်နိုင်ငံဖွား UC Berkeley ဘွဲ့ရ တဦးက ပန်းချီ လည်း ဆွဲတတ်တဲ့.. Lanscape architect လည်းဖြစ်တဲ့… “စွမ်း”ရဲ့ “စွမ်းရည်” ကို တွေ့ရှိပြီး … “ဒို့အိမ်”placemaking project တွေ မှာလက်တွဲလုပ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။
“ဒို့အိမ်” Alley Garden Project ဆိုတာ ရန်ကုန်မှာ နောက်ဖေးလမ်းကြားတွေကို ရှင်းလင်းသုတ်သင်ပြီး လှပအောင် တိုက်နံရံတွေမှာ လည်း ပန်းချီဆွဲတယ်… စသည်ဖြင့် heritage conservation and urban renewal နဲ့တွဲလုပ်နေတာလေ။ “စွမ်း”နဲ့တော့ အကိုက်ဘဲ။ အောင်မြင်တဲ့ လမ်းလေးတွေလည်းရှိတယ်။မအောင်မြင်တဲ့လမ်းလေးတွေလည်းရှိတယ်။ ရှင်းပြီးသားလမ်းလေးတွေကို မထိန်းသိမ်းရင် ပြန်ရှုပ်ပြီး မအောင်မြင်တော့ဘူးပေါ့။
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ရှင်းထားတာလေးတွေ ရေရှည်တည်တံ့ဖို့ (sustainability) အတွက် အိမ်ရှင် (residents) တွေကိုပါ ပါဝင်လှုပ် ရှားခိုင်းပြီး တာဝန်ယူခိုင်းကြတယ်။ ဒါမှ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း အောင်မြင်နိုင်မယ်မဟုတ်လား။ ကိုယ့်လမ်းကို ကိုယ်ပါဝင်ထိန်းသိမ်းမှ သာ ယာတဲ့လမ်းလေးဟာ တည်မြဲသလို .. ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ်ပါဝင်ထိန်းသိမ်းမှသာယာတဲ့တိုင်းပြည် တည်မြဲမှာ မဟုတ်ပါလား။
ဟုတျပါတယျရှငျ… အနျကယျဦးထှနျးလှငျရဲ့ သမီး “စှမျးရညျထှနျးလှငျ” ပါတဲ့….ဟယျ… မကွီးကွူရယျ….သမီးက ဒီလောကျတျောတာ… အနျကယျဦးထှနျးလှငျကွီးက မကွားဘူးလားဟယျ…. အနျကယျရေ… အနျကယျ့သမီး “စှမျး” ဘယျလောကျ “စှမျးရညျ” ရှိကွောငျး တ လောကလုံးကို ကွှားလိုကျစမျးပါ..အနျကယျရာ….“စှမျး” တိုငျးပွညျအကြိုးပွု ရညျရှယျခကျြတှေ အောငျမွငျပါစေ….. “စှမျး”လို “စှမျး ရညျ”ရှိတဲ့ လူငယျမြားစှာပျေါပေါကျပါစေ….အနာဂတျမှာ “စှမျးရညျ”ရှိတဲ့ နိုငျငံတျောကွီးဖွဈပါစေ….။
ဒီလောကျစှမျးရညျရှိတဲ့ မွနျမာသမီးငယျလေး တဈယောကျကိုတှရေ့ သိရတာ နိုငျငံအတှကျ အားရှိလိုကျတာ။ဒီလိုစှမျးရညျရှိတဲ့ သားငယျ သမီးငယျတှေ အမြားကွီးပျေါထှနျးပါစေ…အဲဒီစှမျးရညျရှိတဲ့ သမီးငယျလေးနံမညျက “စှမျးရညျ“တဲ့ မွနျမာပွညျက ၄ တနျးကြောငျးသူ “စှမျး ”…. စင်ျကာပူကို မိခငျနဲ့အတူ လာလညျရငျး …. ခဏတညျးတဲ့အိမျက အိမျရှငျကလေးလေးတှနေတေဲ့ ရပျကှကျထဲက အစိုးရကြောငျးမှာ primary(4) ( Grade 4) အတှကျ ဝငျခှငျ့စာမေးဝငျဖွကွေညျ့ရာ။
သူ့အဖွတှေကေို အဲဒီကြောငျးက သဘောကပြွီး တဈတနျးကြျောကာ primary (5) မှာ ဝငျခှငျ့ပေးလိုကျတဲ့အတှကျ …စင်ျကာပူမှာ ကြောငျး နဖွေဈသှားသတဲ့။သူမြားတိုငျးပွညျမှာ သမီးငယျလေးကြောငျးတကျမှာမို့ မိခငျမှာ ကနျြတဲ့သားငယျသမီးငယျ ခငျပှနျးတို့ကိုထားခဲ့ပွီး သ မီးကို လိုကျစောငျ့ရှောကျရသတဲ့။ စှမျး လေးက အားနာပွီး အမေ..ရနျကုနျ အဖဆေီ့ပွနျပါ။သမီးကို အမမေိ့တျဆှအေိမျ တဈအိမျအိမျမှာသာ ထားခဲ့။ သမီးနတေတျပါတယျ။ ပညာရေးအတှကျ သမီးဖွဈအောငျနမေယျလို့ အမကေိုပွတျပွတျသားသားပွောသတဲ့။
တဈကယျလညျး “စှမျး”လေးဟာ လိမ်မာပွီးနတေတျတော့ နလေရောမှာ အဆငျပွသေတဲ့။စှမျး” လေးက သိပျဇှဲရှိပွီး လုပျသငျ့တာကိုသိ၊ သိ တဲ့အတိုငျးလညျးလုပျနိုငျတဲ့ ကလေး။ “စှမျး”ငယျငယျက သိပျ“၀”တာ။ “၀”တာမှ ကဈနပွေီး လကျကောကျဝတျလေးတှတေောငျ မမွငျရ ဘူးတဲ့။ စင်ျကာပူကြောငျးတှကေ obesity ပွဿနာကို အလေးထား ပညာပေး ပရိုဂရမျတှတေဈစိုကျမတျမတျလုပျတာက တဈကွောငျး၊ ဆယျကြျောသကျနီးပါးသမီးငယျရဲ့ ပတျဝနျးကငျြ peer pressure ကွောငျ့တဈကွောငျး ဖွဈမယျထငျတယျ….။
“စှမျး” ဝိတျလြှော့တော့တာဘဲ။ မစားသငျ့တဲ့ အစာကို မစားသငျ့တဲ့အခြိနျမှာ မစားသငျ့သလောကျ မစားကိုမစားဘူး။ ခွောကျလှာမှာရှိတဲ့ အိမျခနျးကိုပွနျရငျလညျး လှကေားနဲ့ဘဲ တကျတယျ…ဆငျးတယျ။ တဈနှဈအတှငျး “စှမျး”ပိနျသှားတာ…. အခုဆိုရငျ ၂၀ ကြျောသကျ “စှမျး” က … အရမျးလှ ။စှမျး“ လိမ်မာကွောငျး၊ ဇှဲရှိကွောငျး၊ ဉာဏျရှိကွောငျးပွောပွတာပါ။ Physically အောငျမွငျတာတှငျမက… Academically လညျးအောငျမွငျ လိုကျသမှ…..PSLE အောငျတော့… စလုံးတှတေောငျ အိပျမကျမကျယူရတဲ့ ။
Raffle Girls’ School (RGS) ကို ဝငျခှငျ့ရသတဲ့။စင်ျကာပူမှာတောငျ လူ့မလိုငျတှမှေ ဝငျနိုငျတဲ့ကြောငျး။ “စှမျး” RGS ဝငျခှငျ့ရသှားတော့ စှမျးနခေဲ့တဲ့ neighbourhood Primary School က ဂုဏျယူလို့မဆုံးဘူးတဲ့။RGS မှာ year (4) ပွီးတော့ စင်ျကာပူရဲ့ The most prestige Junior College ဖွဈတဲ့ Raffles Institution မှာတကျနရေငျး… ရှေးရိုးဆနျနတောလေးတှေ ကနျြရှိနသေေးတဲ့ Singapore Education System က ရုနျးထှကျခငျြလာတယျ။အတနျးဖျော လူ့မလိုငျလေးတှဟော အမှတျတှကေောငျးဖို့ အပွိုငျအဆိုငျကွိုးစားကွရငျး။
University ကောငျးကောငျးတှဝေငျဖို့သာ အာရုံစိုကျကာ စာသငျခနျးအပွငျဘကျက လောကကွီးကိုမနေ့ကွေတယျ၊ စာအုပျထဲက ပညာ တှကေို apply လုပျဖို့ သတိမရကွဘူး။“စှမျး” ကတော့ out of the box ကို ကွညျ့ခငျြ မွငျခငျြ တှေးခငျြတာ ကွောငျ့ prestige RI ကိုစှနျ့ လှတျပွီး အမရေိကားက University တှကေို ဝငျခှငျ့လှမျးလြှောကျတာ တကျခှငျ့ရသှားတယျ။ ဘယျ University လဲ သိလား………. “ University of California Berkeley”……. OMG!ဘယျ ဘာသာယူလဲ သိလား….. “Landscape Architecture”……. Interesting ! ။
စှမျး” ကိုယျတိုငျက artist လေ… ပနျးခြီလညျးဆှဲတယျ။“UC Berkeley” က ဘှဲ့ ရပွီးတော့ ဘယျလို ဘဝခရီးဆကျလဲ သိလား….. မွနျမာ ပွညျပွနျလာတယျ။ ဘာလုပျလဲသိလား….. “ဒို့အိမျ” Project လုပျနတေယျ။နယျသာလငျနိုငျငံဖှား UC Berkeley ဘှဲ့ရ တဦးက ပနျးခြီ လညျး ဆှဲတတျတဲ့.. Lanscape architect လညျးဖွဈတဲ့… “စှမျး”ရဲ့ “စှမျးရညျ” ကို တှရှေိ့ပွီး … “ဒို့အိမျ”placemaking project တှေ မှာလကျတှဲလုပျဖို့ ဖိတျချေါခဲ့တယျ။
“ဒို့အိမျ” Alley Garden Project ဆိုတာ ရနျကုနျမှာ နောကျဖေးလမျးကွားတှကေို ရှငျးလငျးသုတျသငျပွီး လှပအောငျ တိုကျနံရံတှမှော လညျး ပနျးခြီဆှဲတယျ… စသညျဖွငျ့ heritage conservation and urban renewal နဲ့တှဲလုပျနတောလေ။ “စှမျး”နဲ့တော့ အကိုကျဘဲ။ အောငျမွငျတဲ့ လမျးလေးတှလေညျးရှိတယျ။မအောငျမွငျတဲ့လမျးလေးတှလေညျးရှိတယျ။ ရှငျးပွီးသားလမျးလေးတှကေို မထိနျးသိမျးရငျ ပွနျရှုပျပွီး မအောငျမွငျတော့ဘူးပေါ့။
အခုနောကျပိုငျးမှာတော့ ရှငျးထားတာလေးတှေ ရရှေညျတညျတံ့ဖို့ (sustainability) အတှကျ အိမျရှငျ (residents) တှကေိုပါ ပါဝငျလှုပျ ရှားခိုငျးပွီး တာဝနျယူခိုငျးကွတယျ။ ဒါမှ ဆကျလကျထိနျးသိမျး အောငျမွငျနိုငျမယျမဟုတျလား။ ကိုယျ့လမျးကို ကိုယျပါဝငျထိနျးသိမျးမှ သာ ယာတဲ့လမျးလေးဟာ တညျမွဲသလို .. ကိုယျ့တိုငျးပွညျ ကိုယျပါဝငျထိနျးသိမျးမှသာယာတဲ့တိုငျးပွညျ တညျမွဲမှာ မဟုတျပါလား။